Ahoana ny fomba fiasan'ny Hawaiian Airlines ny sidina?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ahoana ny fomba fiasan'ny Hawaiian Airlines ny sidina?
Hawaiian Airlines hampihena ny sidina manerana ny firenena
Hawaii dia maniry ny tsy hahatongavan'ireo mpitsidika. Mazava ho azy, ny Hawaiian Airlines dia mahalala ankoatry ny fitsangatsanganana, ny raharaham-barotra sy ny dia ataon'ny fianakaviana dia manana anjara toerana lehibe hampifandraisana ny Nosy Hawaii, izay fanjakana 50 amerikana miaraka amin'ny US Darling ary koa Japon. Hawaiian Airlines dia hitohy hiasa ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fampifandraisana ny Hawaiian Airlines.
Saingy, ny sidina dia mampihena ny fandaharam-potoanan'ny sidina manakaiky ny 40 isan-jato amin'ny volana aprily satria ny fanjakan'ny Hawai'i dia miatrika raharaha COVID-19 miakatra izay miteraka fameperana sy fanambarana ataon'ny governemanta misy fiantraikany amin'ny dia. Ny fanovana lehibe nambara androany dia ahitana:
Tahiti: Fampiatoana ny serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Honolulu (HNL) sy Papeete (PPT) noho ny fameperana vaovao amin'ny fahatongavan'ny governemanta Polineziana frantsay izay manome taratra ny fepetra takiana farany napetraka tao Aostralia sy Nouvelle Zélande. Ny fitsangatsanganana farany HNL-PPT dia hiasa amin'ny 21 martsa. Kasaina hiverina amin'ny Mey ny serivisy.
-Mivadika sidina isan'andro hatramin'ny enina tsy an-kijanona isan-kerinandro eo anelanelan'ny Honolulu (HNL) sy ny seranam-piaramanidina Kansai (KIX) any Osaka, ny 6 ka hatramin'ny 28 aprily.
-Mivadika sidina efatra na telo tsy an-kijanona isan-kerinandro eo anelanelan'ny Honolulu (HNL) sy Fukuoka (FUK), ny 5 aprily-1 jona.
-Ny fampiatoana ny serivisy tsy an-kijanona mandritra ny volana aprily eo anelanelan'ny Kahului, Maui (OGG) ary Las Vegas (LAS) dia niasa tamina fiaramanidina Airbus A321neo vatana tery aorian'ny sidina avy any LAS mankany OGG tamin'ny 31 martsa. Hanohy hanolotra serivisy tsy an-kijanona isan'andro i Hawaii Honolulu (HNL) sy LAS miaraka amin'ny fiaramanidina Airbus A330 misimisy.-Fiatoana amin'ny volana aprily sidina faharoa tsy miato miasa amin'ny fiaramanidina A321neo eo anelanelan'ny Honolulu (HNL) sy Seattle (SEA) ary San Francisco (SFO). Hawaiian dia manohy manolotra asa fanompoana isan'andro eo amin'ny HNL sy ny SEA ary ny SFO miaraka amin'ny fiaramanidina A330.
Nosy mpiara-monina: Mampihena ny zana-taratasim-panompoana izay ambany indrindra ny fangatahana, sady mitazona ny fifandraisana manan-danja eo amin'ny Nosy Hawaii miaraka amin'ny tamba-jotra misy sidina mihoatra ny 100 isan'andro amin'ny volana aprily. Mampiato ny serivisy isan'andro tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Kona (KOA) sy Līhu'e (LIH) ny Hawaiian aorian'ny 31 martsa ary hipetraka amin'ny alàlan'ny Honolulu na Kahului, Maui (OGG) ireo vahiny voakasik'izany.
More details Eto.